Okungekho Standard Standard Bearings Working Environment - Rihoo Industry (Hongkong) Co., Limited
Okungekho Standard Standard Bearings Working Environment
Okungekho Standard Standard Bearings yokusebenza imvelo
Ukulimala okuvamile kokusebenza kanye nezimbangela zayo
Ngokubheja okonakalisiwe, ungabona umonakalo obangelwa umonakalo womonakalo kulesi sizathu, ngakho okuhloselwe ukuthuthukisa, ukugwema ukuphindaphinda kokuhluleka.
I-Phenomenon eyodwa: izinhlayiya ezikhuni ezibangelwa ukugqoka amamaki
Umzila wethrekhi kanye ne-roller zimbozwe nge-dent; izinhlayiya kanye nombuso wokugqoka ukugqoka emgodini zichazwe ngombhalo wokugcoba. Izizathu ezingenzeka: ngokuvamile ngenxa yenkambiso yenhlangano ayikho efanelekile. Uma ufaka ukubhekwa, gcina uhlanzekile futhi usebenzise i-grease entsha ukuze uhlole ukuthi uphawu luyaqina.
I-Phenomenon II: ukugqoka kubangelwa ukugcoba okungalungile
Ukugqoka kwendawo kwakuyi-mirror-like; emva kokugijima umbala kwakuluhlaza okwesibhakabhaka noma olubomvu. Kungabangelwa ukugcoba okunganele, futhi kulula ukwenza izinga lokushisa landa ngokushesha. Thuthukisa isimo se-lubrication, hlola umjikelezo we-lubrication kanye nophawu lwamafutha.
I-Phenomenon 3: Ukulimala okubangelwa izimbangela zokucindezela nokusikisela:
Emzimbeni ohambayo wezinguquko ze-oval, ibhola elibhekisele uphawu lokujikeleza. Ngaphansi kokuphrinta kwakumhlophe noma okugqamile. Lokhu kusho ukuthi ukuthwala kududuza ekuphumuleni. Ungafakwa isisekelo sokudlidliza. Uma kunokwenzeka, zama ukusebenzisa amabhethri ebhola esikhundleni sezingubo zokugqoka, ngaphezu kwalokho, lapho ulawula imishini, ulayishe kabusha ukuqinisa izintambo.
I-Phenomenon 4: ukufaka okungalungile nokulayisha ngokweqile okubangelwa i-tooth
Amaketanga angaphakathi nangaphandle ayenamazinyo, futhi umgodi wezintambo ulingana nebanga phakathi kwama-rollers. Isizathu kungenzeka ukuthi ukufakwa akugodli kwindandatho elungile, noma kwi-shaft ye-cone ukucindezela kakhulu noma kumthwalo we-quescent. Sicela wenze ngenqubo yokufaka ecacisiwe, noma ubeke esikhundleni sokuthwala umthwalo ophakeme olinganisiwe olinganisiwe.
I-Phenomenon 5: umzimba wesinye isizwe obangelwa i-tooth
Ngokuyinhloko ibhekisela esimweni sokusebenza sokushisa okungenani okuphezulu nesiphezulu, umswakama womoya, kungakhathaliseki ukuthi kuqukethe ama-gasela noma i-excess dust and so on. Isibonelo, endaweni ebandayo ukusetshenziswa kwangaphandle, kufanele usebenzise i-lithium-based-low-temperature grease; emanzini, amanzi amaningi
Kufanele isetshenziswe i-calcium-based grease; ezimweni ezomile, ezingaphansi kwamanzi, ukhetho olufanele lwamagesi ase-sodium-based soluble.
2. Ukushisa okusebenzayo
Enye yezinga lokushisa elincane lemvelo, kanti elinye lokushisa okuphezulu okungenzeka ngesikhathi sokusebenza. Lapho izinga lokushisa liphezulu, izinga eliphezulu lokushisa lokushisa kufanele likhethwe. Ukushisa okuphelele okusebenzayo kufanele kube ngaphansi kwephoyinti lokugcoba amafutha 10 ~ 20 â "ƒ (i-synthetic grease kufanele ibe 20 ~ 30 â" ƒ). Amafutha asetshenziswe ngokujwayelekile ebangeni lokushisa eliboniswe etafuleni elingezansi.
3. ukulayisha isimo
Ukuze uthole imithwalo esindayo, sebenzisa isilinganiso esincane sokungena kwegesi. Emsebenzini ophezulu wokucindezela, ngaphezu kokudinga ukungena okuncane ngaphandle, kodwa futhi kudinga amandla efilimu ephakeme ewawoyela nokusebenza kwe-extrusion.
I-miniature Deep Groove Ball Bearings I-Basic Piece Of Machinery